Ikkaro - Famoronana an-trano sy DIY
Ikkaro ™ Izy io dia tranonkala iray ahazoako ny fahalalana rehetra azoko tamin'ireo lohahevitra mahaliana ahy. Fanandramana, Arduino, hack, fanodinana ary fampiasana indray ny zavatra, fanamboarana, Motors, Natiora ary zavatra maro hafa izay nangoniko nandritra ny 11 taona mahery niainan'ny bilaogy
Fitaovana rindrambaiko ho an'ny LEGO
Fanamarihana sy fanamarihana
Genesisy an'i Guido Tonelli
Ny tantara mahafinaritra indrindra eran-tany
AntennaPod, ilay loharano misokatra Podcast Player
Ceterach officinarum na doradilla
Pen 3D na Pensil 3D sy ny ankizy
Ireo no lahatsoratra bilaogy farany. ny vaovao farany amin'ireo lohahevitra nosoratanay ho an'ireo nostalgic ho an'ny endrika bilaogy izay liana amin'ny filaharan'ny foto-kevitra.
Iray amin'ireo fizarana lehibe anay, ny antitra sy ilay tiako indrindra. Izy ireo dia fanandramana azontsika atao ao an-trano miaraka amin'ny fitaovana mahazatra.
Fanandramana trano, Fanandramana ho an'ny ankizy
Eny. Toerana hiresahana momba ny famoronana tao an-trano, liana amin'ny fahalianana. Vahaolana izay manamora ny fiainantsika na mitantana hamaha olana isika ary tsy manana fitaovana na fitaovana ilaina.
Mampiodina isika, manala ny mekanisma ho an'ny zavatra noforoninay, manangona karazana karazana zavatra harian'ny olona hafa izahay ary mamerina azy io indray.
Tsy ny famoronana ihany fa ny fomba fiaina.
Famoronana sy fikafika kely isan'andro isan'andro izay manamora ny fiainantsika na mamorona sy mamorona fotsiny ho an'ny fahafinaretana amin'ny fahafantarana fa afaka manao ireo zavatra tadiavinao ianao. Ho an'ny fanamby ataon'ny sainao.
Kit fanombohana mankany amin'ny tetik'asa Arduino Super Starter Kit UNO R3 avy amin'i Elegoo
Fanodinana vilany elektronika sy mekanika
Avereno indray ny fanaraha-maso taloha ary esory ny flyback
Fanesorana ny famantaranandro Ikea Lottorp na Klockis
Fianarana fianjerana milina
Google Collaboratory na Google Colab
Mihevitra ny tenako ho voajanahary aho. Manana sary, boky ary naoty an-jatony momba ny zavamaniry, vorona, biby, tendrombohitra, renirano, jeolojika, toetrandro ary izay rehetra mifandray amin'ny natiora aho. Ireo lahatsoratra ato amin'ity fizarana ity, ho fanampin'ny fampahalalana momba ny zavamaniry na ny vorona, dia misy data izay angoniko amin'ny fahitana sy fanandramana mety ataoko.
boky, toetra, Fanamarihana sy fanamarihana
Ity dia faritra lehibe iray hafa amin'ny tranonkala. Miresaka boky novakiako aho ary manamarika izay raisiko. Izy ireo dia mihoatra ny famerenana fotsiny, izy ireo dia fanamarihana tiako ho tadidy sy "masomboly" amin'ny boky, sary hosodoko, mpanoratra, olo-malaza, hetsika ara-tantara izay tiako ho fantatra bebe kokoa.
Hevitra Bullet Journal
Raha te hanohy hahita ny zava-drehetra ao Ikkaro ianao:
Ireo sokajy rehetra amin'ny tranonkala
Moto mandeha amin'ny herinaratra
Origami na Origami
Fanaraha-maso radio sy fiaramanidina modely
Ny fiarovana ny informatika
Te hahafantatra bebe kokoa ve ianao?
Na eo aza ny mety ho fiheverany an'ireo fampianarana tsikelikely ireo, Ikkaro dia antso iray handosirana ny utilitarianism.
Izany no antony maro ny hacks, fanovana DIY, fanorona na fanandramana ny pejy tsy manana tanjona manokana na tanjona mahasoa. Fa kosa ho an'ny fahafinaretana amin'ny fianarana na satria misy zavatra azo atao amin'ny fomba mivaingana na izany aza.